yaqaana in android premium Spotify
Qaybta 1.How soo bixi Spotify APK android premium u phone smart ama kiniin
Qaybta 2.PartHow si ay u xaliyaan marka android premium Spotify aan shaqayn
Sida shirkad kale Spotify sidoo kale waa madal ugu fiican in uu mar walba u xaqiijiyey in user helo adeegyada ugu fiican oo loo isticmaalo by malaayiin adduunka oo dhan madal ay Android in Hubi in ka dhigi lahaa sida in shirkadda ayaa suuqa in si fudud lagu qabtay ka dib oo ku qanacsan. Natiijada ayaa sidoo kale xiddig iyo raashinka codsiga download ka Play Google Store tahay in la hubiyo si aad u hubiso sida guusha leh shirkad waa in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale ku taliyey in user waa in isticmaalka info hoos ku qoran si aad u hesho natiijooyinka.
1. Sida loo soo bixi Spotify APK android premium u phone smart ama kiniin
Cinwaanka taasi ka dhigan tahay in si fudud sida Spotify lagala soo bixi laheyd isticmaalka hababka midabbo oo kaliya ku dhiirigelinayaan in uu ama casriga ah ee isticmaala bixio codsan oo ay tahay sabab ka mid ah in feejignaan user waa inay hubiyaan in khabiir ku jiro si ay u caawiyaan soo baxay saacadda ay baahan yihiin iyo waxa ay sidoo kale hubin doona in user marnaba helo arrimaha sida faylasha APK mar soo bixi waxaa mararka qaarkood laga badiyay telefoonada gudahood ama downloads ka gal oo taas daraaddeed waxaa la taliyay in la hubiyo in user helo adeegyada ugu fiican oo ay soo socda tallaabooyinka lagu xusay hoos ku qoran:
1. Codsiga Spotify APK waa in laga soo degsan si ay u helaan shaqo u sameeyeen;
2. Marka waxaa la soo bixi u tahay in la xuso in user waa in la hubiyo in file waxaa taabtay si aad u hesho codsiga lagu rakibay sameeyo:
3. user waa in la hubiyo in macluumaadka account Spotify waxaa loo isticmaalaa inuu saxiixo ama in la hubiyo in xisaabta la heli sameeyo:
4. user wuxuu hubin doonaa in button ciyaarta la isku soo riixayo in la sameeyo hees play iyo badhanka dhibcaha hogaanka la isku soo riixayo in ay baadhaan heesaha oo ka dhigi kartaa:
2.How si ay u xaliyaan marka android premium Spotify aan shaqayn
Si magnitude oo gacanta ku hoos ku qoran yihiin tobanka arrimaha in dadka isticmaala ee Spotify wajiga ee la xiriirta madal android. Arrimaha yar yar yihiin in xajmiga iyo mid xal tallaabo ayaa la siiyey si ay u hubiyaan in user marnaba gasho kaaftoomi ah geedi socodka dheer ee soo socda.
1. Codsiga caanuhu
Waa mid ka mid ah arrimaha ugu badan ee isticmaala wajihi arrintan la xiriira oo waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in khasnado ee codsiga la nadiifiyo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xidhiidha arrintan iyo in uu helo waxa ugu yar gudahood go'an markii ay suurto gal. Jidka si e raacay waa Menu> barnaamijyadooda> Spotify> khasnado cad hoose:
2. Codsiga ka dhigaysa dhawaaqyada
Sidoo kale waa mid ka mid ah arrimaha ugu xumaa in user wajahaya la xiriira codsiga. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ogeysiis dhawaaqa codsiga waa Disable si loo hubiyo in la hurdo u dhow yahay wanaagsan soo bixin waa riyaaqay sida dadka badankiisu ma heli of chiming codadka habeenkii:
Khilaafka 3. Codsiga
Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in codsiga taas oo khilaafaysa shaqaynta Spotify sidoo kale ku siin gumaarka ah si user ah si loo hubiyo in codsiga aan la isticmaalo habka ugu fiican. Waxaa lagula talinayaa in ay kabaha telefoonka hab kabashada ka dibna mid ka mid abuurtaan codsiyada ka mid ah oo la tirtiro mid ka mid ah is khilaafsan fudayd iyo qanacsanaanta. Jidka waa menu> dukaanka Google play> aan barnaamijyadooda> rakibay> uninstall
4. arrimaha Battery la xiriira
Waxaa la arkay in user helo natiijada ugu dhibsado marka ay timaado isticmaalka Spotify ee la xiriirta nolosha batteriga iyo cabashada waa in batari la xirto off. Si loo hubiyo in arrinta la xalin user waa in download codsi taageeraya. Batari CM waa codsi ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Jidka mar waa Menu> Google Play> Search> CM batari> dajiyo.
5. interface la qaboojiyay
Si loo hubiyo in arrinta la tir marka ay timaado codsiga Spotify waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in codsiga waa xoog joojiyay iyo karti mar kale si aad u hesho arrimaha la xalin. Jidka in la raaco waa Menu> barnaamijyadooda> Spotify> Force stop> awood.
6. arrimaha xiriiriyaan
Si wanaagsan u isticmaasho codsiga Spotify waa in xiran internetka laakiin codsiga uusan mararka qaarkood in la hubiyo in arrinta loo abuuray. Spotify waa caan ah in la hubiyo in xogta mobile waa isku dhac ah si loo hubiyo in app aan la xiran. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in xogta mobile la demiyo adoo riixaya hoos deegaanka wargelinta ka dibna isticmaalka macluumaadka si ay u dami:
7. arrimaha syncing
Sidoo kale waa mid ka mid ah arrimaha ugu wajahay arrintan la xiriira iyo user wuxuu hubinayaa in in-Wi Fi waxaa iska jeestay oo ku saabsan arrintan la xiriira si loo hubiyo in arrinta la xalin. Jidka waa Settings> Network> Wi-Fi off ka dibna ku :,
8. Codsiga shil
Ma aha arrin soo noqnoqda, laakiin weli tiro badan oo dadka isticmaala ay wajahayaan. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in khasnado ee codsiga la nadiifiyaa si aad u samaysay shaqada. Menu> barnaamijyadooda> Spotify> khasnado cad hoose ah jidka in la raaco:
9. screen kaliftay
Sidoo kale waa mid ka mid ah arrimaha dadka isticmaala Spotify wajiga. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in qalabka uu yahay ilaa sumaddii iyo inta badan qalabka Samsung waxaa lagu xaqiijin karin adigoo gujinaya ku kala duwan yihiin qeybaha kala duwan ee shaashadda oo la qaban karo, adigoo garaacaya * # 7353 ka dibna xulashada Grid qaado ee Mode oo uu oggolaan in user si loo hubiyo in qayb kasta oo kasta oo ka mid ah shaashadda laga hubiyo.
10. Phone helo kulul
Si loo hubiyo in arrinta la xalin waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in codsiga wanaagsan saddexaad la geliyo, waayo, qaboojinta processor. Waa sababtaa in codsiga guud Spotify joogto ah ka shaqeeya si loo hubiyo in songs waxaa lagu ciyaaray oo dadka isticmaala waxaa lagu cafiyo si qabow batari waa lagama maarmaan. Mid ka mid ah ugu wanaagsan ee uu leeyahay menu Jidka> dukaanka Google play> Search> sayidkiisa Nadiifi> rakibi dhammayn nidaamka:
> Resource > Android > inay ku fiicnaadaan in Spotify Premium Android